Unicode Font in iPad2 - MYSTERY ZILLION
မူလ › Mobile › iPad ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
Unicode Font in iPad2
Zawminsoel September 2011 edited September 2011 in iPad iPad2 ထဲမှာ လောလောဆယ် ဇော်ဂျီ ဖောင့်သွင်းထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် Website တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတာတွေကိုတော့မြင်ရပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ယူနီကုတ် နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဖောင့်တွေကိုကြည့်လို့မရပါဘူး..ယူနီကုတ် ဖောင့်က Ipad2 အတွက်သွင်းလို့ရနိုင်လားမသိဘူး...တစ်ချို့က ယူနီကုတ် ကို Ipad2 မှာသွင်းလိုက်ရင် ပြဿနာ တော်တော်တက်တယ်လို့ဆိုကြလို့ပါ..ယူနီကုတ် နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကို ဖတ်ချင်ပါတယ် ... ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်ပါမလဲ ? Tagged:
IT_KOKO September 2011 Registered Users ဆိုဒ်တော်တော်အများများကို ဘားမှသွင်းစရာမလိုဘဲ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ Zawminsoel September 2011 Registered Users ယူနီကုတ် ကို ဇော်ဂျီနဲ့ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ Plugin ထည့်ထားတဲ့ Site ဆိုရင်တော့ ဖတ်လို့ရပါတယ်...ဥပမာ facebook ပေါ်မှာ ယူနီကုတ်နဲ့ရေးထားတာ ကိုတော့ ဖတ်လို့မရဖြစ်နေတာပါ... day September 2011 Registered Users something wrong :/ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla